19/09/2021 - ALANZAYAR
ချစ်ရတဲ့ ပရိတ်သတ်များဆီက မထင်မှတ်ထားတဲ့ လက်ဆောင်လေးရခဲ့လို့ ပျော်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
ချစ်ရတဲ့ ပရိတ်သတ်များဆီက မထင်မှတ်ထားတဲ့ လက်ဆောင်လေးရခဲ့လို့ ပျော်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း အောင်လအန်ဆန်းကတော့ သူရဲ့ ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်များဆီက မထင်မှတ်ဘဲ လက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကို အခုလို ဝမ်းသာစွာ ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။ One Championship ပရိတ်သတ်များက အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်။ မနေ့က ကျွန်တော်ရဲ့ Win A […]
CDM ပြုလုပ်နေတဲ့ စက်ခေါင်းမှုး မနေ့က ရက်စက်စွာ ရိုက်နှက်ခံရပြီး သေဆုံး
CDM ပြုလုပ်နေတဲ့ စက်ခေါင်းမှုး မနေ့က ရက်စက်စွာ ရိုက်နှက်ခံရပြီး သေဆုံး CDM ပြုလုပ်နေသည့် စက်ခေါင်းမှူး ဆိုင်ကယ်ရိုက်အလုခံရရာမှ ကွယ်လွန် လွန်ခဲ့သည့် ၉ရက်က မန္တလေးမြို့၊ ၆၂လမ်းနှင့် ၁၂၈လမ်းတွင် ဆိုင်ကယ်ရိုက်အလုခံရသူသည် ဦးခေါင်းအတွင်း ‌သွေးခဲကာ ယနေ့ သေဆုံးမှုဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားသွားသည်။ သေဆုံးသွားသူမှာ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်း […]
တော်လှန်ရေးဘဝကို ရွေးချယ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ မြနှင်းရည်လွင်ကို လေးစားအားကျပြီး ချီးကျူးနေကြသော ထိုင်းနိုင်ငံသားများ
တော်လှန်ရေးဘဝကို ရွေးချယ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ မြနှင်းရည်လွင်ကို လေးစားအားကျပြီး ချီးကျူးနေကြသော ထိုင်းနိုင်ငံသားများ ပရိတ်သတ် ကြီးရေအောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဘဝနဲ့ သူဌေးသမီးဘဝကိုစွန့်လွှတ်ပြီး လက်နက်ကိုင် တော်လှန် ရေးမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကအင်တိုက် အားတိုက် ပါဝင်နေတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံသား တွေ ရဲ့ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုမှုအရမ်းပဲရရှိနေတယ်လို့သိရ ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ မြနှင်းရည်လွင် အကြောင်းကို တလေးတစားရေးသားပြီးထိုင်းသရုပ်ဆောင်တွေကိုလည်းမြနှင်းရည်လွင်ကိုအားကျအတုယူဖို့၊လေးစားဖို့တိုက်တွန်းထားတာတွေရှိနေပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကရွှေတောင်ကြားမှာနေထိုင်တဲ့ […]
စစ်တပ်က သားဖြစ်သူကို စစ်ကြောရေးမှာ ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေမှု ဖခင်ဖြစ်သူ မခံစားနိုင်၍ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်
စစ်တပ်က သားဖြစ်သူကို စစ်ကြောရေးမှာ ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေမှု ဖခင်ဖြစ်သူ မခံစားနိုင်၍ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင် ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပေါင်းတည်မြို့မှာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က သားအဖ နှစ်ဦးကို Mytel တာဝါတိုင်တွေ ဖောက်ခွဲဖို့ ကြံစည်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပြီး သားဖြစ်သူ ညဥှ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရမှုကို ဖခင်ဖြစ်သူက တွေ့မြင်ကြားသိနေရရာက မခံစားနိုင်တော့တဲ့အတွက် […]
D-Day ခေါ်ပီး ပထမဆုံးလွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်လာနိုင်တယ့် စစ်ကိုင်းတိုင်း…..
D-Day ခေါ်ပီး ပထမဆုံးလွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်လာနိုင်တယ့် စစ်ကိုင်းတိုင်း….. နောက်ဆုံးရသတင်းများ တင်ဆက်မှု အစအဆုံးသေချာနားထောင်ကြည့်…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို D-Day ခေါ်ပီး ပထမဆုံးလွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်လာနိုင်တယ့် စစ်ကိုင်းတိုင်း….. နောက်ဆုံးရသတင်းများ တင်ဆက်မှု အစအဆုံးသေချာနားထောင်ကြည့်…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို D-Day ခေါ်ပီး ပထမဆုံးလွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်လာနိုင်တယ့် စစ်ကိုင်းတိုင်း….. နောက်ဆုံးရသတင်းများ တင်ဆက်မှု အစအဆုံးသေချာနားထောင်ကြည့်…. […]
မိခင်ဖြစ်သူထားသွား၍ စိတ်ရောဂါရရှိသွားသော ဖခင်ဖြစ်သူကို ငြိုငြင်ခြင်းမရှိပဲ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သော ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်
မိခင်ဖြစ်သူထားသွား၍ စိတ်ရောဂါရရှိသွားသော ဖခင်ဖြစ်သူကို ငြိုငြင်ခြင်းမရှိပဲ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သော ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကျေးလက်ဒေသတွင် နေထိုင်သော ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်သည် စားဝတ်နေရေးအတွက် ကျောင်းမှထွက်ကာ စိတ်ရောဂါဖြစ်နေသော ဖခင်ဖြစ်သူကို ပြုစုကျွေးမွေးရင်းနှင့် အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် အခက်အခဲများကြားရုန်းကန်နေရသည်။ မိခင်ဖြစ်သူသည် ဆင်းရဲသည့်ဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့သည့်အဆုံး ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် သားလေးနှစ်ယောက် အိပ်မောကျနေခိုက် အိမ်ကနေ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ […]
မြန်မာနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေကို မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ ဝမ်းသာအားရ နှုတ်ဆက်ပြခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မလေး Lisa ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
မြန်မာနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေကို မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ ဝမ်းသာအားရ နှုတ်ဆက်ပြခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မလေး Lisa ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် ထိုင်းမလေး Lisa ကတော့ Black Pink Member တစ်ဦးအဖြစ် ပွဲထွက်ပြီးကတည်းက အောင်မြင်မှုတွေကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုရရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဆိုရင် Lisa က သူမရဲ့တစ်ကိုယ်တော် […]
ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲ ချစ်ဇနီးလေးက သမီးဦးရတနာလေးကို မွေးဖွားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဖခင်နေရာကိုရောက်ရှိသွားပြီး အရမ်းပျော်ရွှင်နေတဲ့ နက္ခတ်
ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲ ချစ်ဇနီးလေးက သမီးဦးရတနာလေးကို မွေးဖွားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဖခင်နေရာကိုရောက်ရှိသွားပြီး အရမ်းပျော်ရွှင်နေတဲ့ နက္ခတ် MRTV4မှ ထုတ်လွှင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်နက္ခတ်ကတော့ အခုချိန်မှာ ချစ်ရသူနဲ့အတူ ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နက္ခတ်ကလည်း သူ့ရဲ့ဇနီးသည်ကို အရမ်းချစ်ပြီး ကြင်နာယုယပေးတတ်တဲ့ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နက္ခတ်တို့ဇနီးမောင်နှံက အေးအတူပူအမျှနဲ့ […]
နေပူထဲမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းဓားသွေးပြီး ဝမ်းရေးဖြေရှင်းနေရတဲ့ မျက်မမြင်အဘအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော်မိုးစက်
နေပူထဲမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းဓားသွေးပြီး ဝမ်းရေးဖြေရှင်းနေရတဲ့ မျက်မမြင်အဘအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော်မိုးစက် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေဟာ အလုပ်ကြမ်းတွေနဲ့ မသင့်တော်ပေမယ့် ဝမ်းရေးအခက်အခဲနဲ့ ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာ အရိပ်အောက်အေးအေးလူလူမနေနိုင်တော့ဘဲ ဘဝကိုပင်ပင်ပန်းပန်းဖြတ်သန်းနေရသူတွေလည်း မနည်းပါဘူး။ ဒီနေ့မှာတော့ လူရွှင်တော်မိုးစက်ဟာ အသက် (၇၀) ရှိနေပေမယ့် နေပူထဲမှာ တစ်လမ်းဝင်တစ်လမ်းထွက်နဲ့ ဓားသွေးပြီး ဝမ်းရေးဖြေရှင်းနေရတဲ့ အဘဦးမောင်ကြိုင်အတွက် တစ်လစာဖူလုံသွားအောင် […]
မိဘတွေကပါ ကြည်ဖြူလက်ခံတဲ့ အချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ထိုင်းမင်းသမီးချောလေး Kim
မိဘတွေကပါ ကြည်ဖြူလက်ခံတဲ့ အချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ထိုင်းမင်းသမီးချောလေး Kim နာမည်ကြီးထိုင်း Cele စုံတွဲတွေထဲမှာတော့ Mark Prin နဲ့ Kimmy တို့စုံတွဲလေးက အများကအားကျရတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Mark Prin က ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သလို […]